GBP Pound inoenderera inoratidza Kuratidza Simba. Kubatanidzwa Kwakakura neMahara - Forex Lens
Kutengesa & Tsigiro Runhare: 1-888-673-9567
Blackwell MUNYIKA YOSE
ForEX KUTENGA BLOG
DAILY YEKUTAURA ANALYSIS
SEI kupinda Trading
Kugadzira YAKANYANYA KUZIVA ZUVA KUTADZIRA
KUTI Uwane MUTORESI WEMUFUNDI
Mawaniro ZVAKARURAMA bhuroka kuuraya zvakaenda
KUSIMBIRA KUTI ISANGANO
GBP Pound anoramba Wokuratidza Strength. Kubatanidzwa Kwakakura neMajor
Forex anonongedzera, Forex Kutengesa Kuongorora, Urarame Bhuku Rekushandisa, Technical Analysis
Ndinofara Kutenda kune vatengesi vedu vese muUS. Mune yemazuva ano Forex tekinoroji kuputsika kuputsa, isu akaongorora mamiriro ezvazvino chiratidzo chechiratidzo kubva nezuro. Takawana mashoma mashoma anokwanisa kusetiwa kwePDPUSD uye USDJPY. Mushure meizvozvo, takapedza nguva takatarisa BTCUSD neCrude Oiri uye takaita chidzidzo chipfupi pa Maitiro ekudhirodha ma Fibonacci mazinga.
Munguva yepazuro webinar, takaratidza zviratidzo zvekutengesa zveEURNZD, XAUUSD, GBPJPY uye Crude Mafuta, asi mutengo chiitiko cheizvi setup hauna kuzove nemvumo yedu yekupinda. Hukuru hwevaviri hwakaramba huchibatanidza mumatanho avo akakosha. Sezvo nhasi kuRekutenda kuUnited States, tinogona kuwona kuwedzera kubatanidzwa uye zvisiri izvo maitiro mumisika. Kunyange zvakadaro, takanga tichiri kukwanisa kuwana mamwe maviri ekutengesa setups munharaunda yedu, izvo zvinogona kuita kuti zvipinde maawa mashoma anotevera. Isu takakwanisa kuwana pfupi yekutengesa chiratidzo chePDPUSD uye chiratidzo chehurefu che USDJPY. Joinha isu nhasi kuti tiwane mukana kune yedu yekupinda mutengo, mira kurasikirwa uye utore puroviti tarisiti.
Sezvakakurukurwa muchikamu chezuro chekutengeserana, BTCUSD yasarudza kutora zvakadzama kudzoka kunzvimbo 7500. Vatengi vanogona kutenderedza iyo heavyweight crypto kudzokera kumusoro kune rutsigiro rwapfuura pa8700. Iyi ndiyo yaive nhanho chaiyo yatakatora ipfupi kubva kumashure kutanga kwaNovember, kwataidana kuti mutengo kuna 7500. Nzvimbo yedu yeCrude Mafuta pfupi yakaramba ichibatanidza. , sezvo parizvino yakagara kune yechipiri kuramba nzvimbo. Tinotarisira kuzorora kweanopokana aya kutumira ichi chinhu pasi chakaderera.
Mamwe mavhiki ekutengesa ane mutengo wakakura chiitiko, uye mamwe mavhiki ekutengesa anongova akajeka. Vhiki rino ndiro raive rekupedzisira, nePDP vaviri vaviri vachifamba zvisizvo. Zvichienderana nezvekutarisa uku, isu ticharega kupinda zvakare zvakare GBP (Pound) vaviri vaviri kwevhiki yasara yekutengeserana. Tichafanira kushivirira kudzamara taona zvimwe zvakanaka zvemutengo mumisika. Sezvo iwe paunenge uchikura uye uchidzidza zvakawanda nezvekutengeserana nesu muTafura yedu YeMukati, iwe uchadzidza kuti kutengesa psychology uye capital kuchengetedza zvakangofanana nekuve nenjodzi yekutarisira njodzi. Izvi zvinhu hazvitaurwe pamusoro zvakakwana mu Forex. Dzimwe nguva kugara pamativi ari chinhu chakanakisa kuita.
Kana iwe uri muUnited States, chinhu chakanakisa chaunogona kuita iko zvino kugara kure nemisika uye kushandisa nguva yemhando yepamusoro nevadiwa vako. Nezvakataurwa, isu tinotarisira kuti imi mose muchave neKurumbidza Mufaro Yekutenda zvisinei nekuti uri kupi munyika, uye ndapota tengesa zvine mutoro!
Zvazvino Promos (Anopera Muvhuro)
Gamuchira Kudzokorora 25% Off Kutsiurwat kune yedu yekutengesa Kamuri uchishandisa Coupon Code: BLACKFRIDAY
Gamuchira Kudzokorora 40% Off Discount kune yedu yeGore Renhengo inoshandisa Coupon Code: KUTENDA
Tarisa uone kusaina.
November 28, 2019 /by chinabuddy
Tags: btcusd, forex dzidzo, Forex anonongedzera, forex signals gbpjpy, forex yekutengesa imba, gbpusd, Pound, zviratidzo zvegoridhe
https://www.forexlens.com/wp-content/uploads/2019/11/FXL-Youtube-November-28-2019.png 720 1280 chinabuddy https://www.forexlens.com/wp-content/uploads/2018/01/forex-lens-logo-expert-forex-signals.png chinabuddy2019-11-28 13:14:342020-02-05 10:22:15GBP Pound anoramba Wokuratidza Strength. Kubatanidzwa Kwakakura neMajor
Federal Reserve Inoderedza Mutero + Tinotengesa Sei Izvi?
EURJPY Inopa nepo EURAUD Yepfupi Setup Inoita
US Dollar Bulls Dzadzoka? + CADJPY uye CADCHF Trades
Mariketsi Akamirira FOMC Economic Projections
Coronavirus Njodzi-Kudzvinyirira Kunoenderera + Sei Kutengesa Ichi Chiitiko?
EURUSD purofiti, Ndarama USDJPY zvakaenda For Next Week
Zvimwe Nezve Forex
US Dollar Bulls Dzadzoka? + CADJPY uye CADCHF TradesJuly 9, 2020 - 1: 20 pm
Ngwarira maSmoscreens + AUDJPY Short SetupJuly 8, 2020 - 1: 08 pm
Goridhe Inenge kuma 1800 + CADJPY Ipfupi Wagadzirira?July 7, 2020 - 2: 15 pm
Yakanaka USD Kugadzira Dhata + EURUSD Pfupi?July 6, 2020 - 1: 28 pm
Risk Management: Mafambisirwo Parizvino Ari Kukanganisa Mutengo weUSAJuly 4, 2020 - 12: 00 pm
Teerera kuna Jon Morgan paSiriusXM naAndrew Krystal paCanada Talks 167
Inowirirana Live Session
Forex Kutengesa Kuongorora
Forex Kutengesa Blog
Urarame Bhuku Rekushandisa
Inoratidzwa Pane SiriusXM
Joinha nharaunda yedu nhasi paDiscord uye taurirana nevatengesi vedu uye dzimwe Nhengo! #ForexLens https://t.co/2RRYlrnJYH
Dzidza, Trade, Profit
Forex Lens inopa Forex kutengesa mhinduro kune vanotanga uye nyanzvi mutengesi zvakafanana. Inzwa wakasununguka kutumira email kana kutifonera nemubvunzo, hurukuro kana zvinoshungurudza.
483 Green Migwagwa,
© Copyright - Forex Lens - Ziso Rako MuMaroke
Yedu yedhijitari & kushambadzira kunoiswa simba nevatikabatana navo pa Yako Fuse Inc
Ziva kuti Forex kutengeserana uye kutengesa mumusika chero inosanganisira crypto ine mukana wekurasikirwa kwemari pamwe nekuwana. Usatengeserana nemari yausingakwanise kurega. Izvo zvinokwanisika kurasikirwa nemari yako yose paunenge uchitengesa sezvo paine zvinhu zvakawanda zvisiri mukutonga kwako kana kwedu. Mamwe ma Forex broker angakubata iwe mutoro yekutengesa capital inopfuura yako chiyero uye inopfuura nepamberi. Ziva kuti uyu mutoro ndeWAKO. Forex Lens haina kutora chero mhosva yekurasikirwa kupi kwaungauya nekuda kwemashumiro edu, zvikwangwani zve forex, zvikwangwani zve crypto, maakaunti akachengetedzwa kana chero chero mimwe masaini emusika atinogona kupa nguva nenguva. Forex Lens iri kuzoshandiswa sechishandiso chekudzidzisa kuti ubatsirwe kuona maitirwo evanoita vatengesi vezuva uye vatengesi vekufungidzira vanoshanda kubva pazuva kusvika kuzuva nevhiki kusvika pasvondo. Nekusaina kumusoro semunyoreri unobvuma kuti Forex Lens haisi kupa zano rezvemari asi pane kupa maonero ekudzidzisa pamisika. Isu hatitore chero mutoro wekuwana kana kurasikirwa muakaunti yako nekuda kwezvikwangwani zvedu uye / kana masevhisi kana chero zvigadzirwa zvine chekuita nezve forex pane chero yedu webhusaiti kusanganisira iyi.
Forex Signals ye GBPJPY, XAUUSD uye EURNZD Forex Kutengeserana Inobatsira Svondo Ino: Recap + Musika Outlook Yevhiki Inotevera
Saiti iyi inoshandisa makuki. Nekuramba uchiongorora saiti, uri kubvumirana nekushandisa kwedu kuki.
Cookie uye Yakavanzika Zvirongwa
Tinogona kukumbira makuki kuiswa pane chako chinhu. Isu tinoshandisa makuki kutizivisa paunoshanyira mawebhusaiti edu, maitiro aunoita nesu, kupfumisa ruzivo rwako rwevashandisi, uye kugadzirisa hukama hwako newebsite yedu.
Dzvanya pamisoro yemhando dzakasiyana kuti uwane zvimwe. Iwe unogona zvakare kuchinja zvimwe zvaunofarira. Ziva kuti kuvhara mamwe marudzi emakuki kunogona kukanganisa ruzivo rwako kune mawebhusaiti edu uye masevhisi atinogona kupa.
Inokosha Webhuki Makuki
Aya makuki anodiwa kwazvo kuti akupe iwe masevhisi anowanikwa kuburikidza newebhusaiti uye kushandisa zvimwe zvayo zvinhu.
Nekuti makuki aya anonyatsodiwa kuti aendese webhusaiti, haugone kuiramba kana kukanganisa maitiro edu saiti. Unogona kuvhara kana kuadzima nekushandura marongero ako uye kumanikidza kuvhara makuki ese pane ino webhusaiti.
Aya makuki anounganidza ruzivo rwunoshandiswa chero mune fomu yakasviba kutibatsira kunzwisisa kuti webhusaiti yedu iri kushandiswa sei kana mashandiro edu ekushambadzira ari kuita sei, kana kutibatsira kurongedza webhusaiti yedu webhusaiti uye kushandisa kwako iwe kuitira kuti uwedzere ruzivo rwako.
Kana iwe usiri kuda kuti isu titarise yako visist kune yedu saiti iwe unogona kudzima kuateedzera mubrowser yako pano:
Dzvanya kuti uite / kudzima google analytics tracking.
Mamwe masevhisi ekunze
Isu tinoshandisawo akasiyana ekunze masevhisi seGoogle Webfonts, Google Map uye vekunze Vhidhiyo vanopa. Sezvo vashandisi ava vanogona kutora data rako seyako IP kero tinokubvumidza kuti uvadzivise pano. Ndokumbira uzive kuti izvi zvinogona kuderedza zvakanyanya kushanda uye kutaridzika kwenzvimbo yedu. Shanduko dzingaite kana uchinge waregedza peji racho.
Google Webfont Zvirongwa:
Dzvanya kuti uite / kudzima google webfonts.
Google Mepu Zvirongwa:
Dzvanya kuti ugoita / kudzima mepu google.
Vimeo uye Youtube vhidhiyo embeds:
Dzvanya kuti uite / kudzima vhidhiyo embeds.
Unogona kuverenga nezve yedu makuki uye zvakavanzika marongero zvakadzama pane yedu Yakavanzika Policy Peji.
Taura nesu, inoshandiswa ne Yako Fuse Inc.